apple iphone 12 magsafe charger inoona isingawanzo kudzikisirwa pamusoro peamazon
Kuru Nhau & Ongororo Apple iPhone 12 MagSafe charger inoona isingawanzo kutapudza pamusoro paAmazon
Apple iPhone 12 MagSafe charger inoona isingawanzo kutapudza pamusoro paAmazon
Apple's official MagSafe charger ye iPhone 12 kazhinji inotengesa pamadhora makumi matatu nemasere uye kashoma kuti pave nemutengo pazviri. Nekudaro, izvozvi, Amazon iri kupa iyo nemutengo we $ 5.50, iri pakati pezvakanakisa mitengo yaunowana yeiyo iPhone 12 MagSafe isina waya charger.
Apple MagSafe Chaja
$ 6 kubviswa (14%) Tenga kuAmazon
Nekudaro, kana iwe wakatenga foni kubva kune iyo iPhone 12 akateedzana, iyo MagSafe charger inofanirwa kuve nekuve nayo, sezvo yayo magineti dhizaini inobaya zvakanaka kune yako iPhone 12 uchipa 15W yesimba zvisina waya. Kunyangwe ichi chibvumirano chingaite senge chakawandisa kuderedzwa, uyu ndiwo wechipiri-wakanakisa mutengo iyo MagSafe charger yave ichiwanikwa kubvira payakaburitswa.
With Prime Day kuswedera padhuze (kuuya muna Chikumi 21-22) isu tinonyatsofunga kuti isu tinogona kutanga kuona akawanda uye akawanda akanaka madhiri senge ino.
MagSafe igadziriro nyowani yezvishongedzo zveyako iPhone 12 nhevedzano yemafoni, ayo anonamira magineti kuseri kwefoni yako. Chaja yeMagSafe ingori imwe yeiyo akanakisa MagSafe zvishongedzo zveiyo iPhone 12 , uye inopa isina waya kuchaja inosvika ku15W. Ehezve, kana iwe uine iyo iPhone 12 mini, iwe unogona kuwana isina waya kuchaja inosvika kusvika ku12W chete.
Panguva imwecheteyo ,jaja iri Qi-inoenderana, saka kunyangwe uine iPhone yechikuru, semuenzaniso, iPhone 8 kana gare gare, unogona kuishandisa sejaja isina waya. Ehe, hazvizonyore kuseri kwe iPhone yako sezvazvinoita neiyo iPhone 12 nekuda kwekushomeka kwemagineti pane akura iPhone mamodheru, asi inogona kubhadharisa yako yekare iPhone kana maAirPod ane waya yekuchaja kesi senge chero imwe Qi -chajaja yakasimbiswa.
maitiro ekugonesa usb debugging
Iyi inogona kunge iri inotonhorera kupfuura dzose AirPods Pro yakamboburitswa neApple
Maitiro ekuona uye kudzima yako Google Izwi Kutsvaga nhoroondo
Apple iPhone X vs iPhone 8 vs iPhone 8 Uyezve
Ndeipi OnePlus 6 vhezheni yandinofanira kutenga? Mirror Nhema vs Pakati pehusiku Dema vs Silk White kuenzanisa
Google inovhara Play Play Chitoro, vashandisi vakakurudzirwa kuchinjira kuYouTube Music
Samsung Gear Fit 2 Pro maoko-on: a fitness tracker yekushanda kwakakomba
Kuedza E-commerce Webhusaiti